१२ औँ राष्ट्रपति कप रनिङ्ग शिल्ड नेरा मा.वि.डाँडा स्कुललाई ( भिडियो सहित) – HostKhabar ::
सुर्खेत : पूर्वी सुर्खेतको सिम्तामा सम्पन्न १२ औँ राष्ट्रपति कप जिल्ला स्तरीय रनिङ्ग शिल्डको उपाधी नेपाल राष्ट्रिय माध्यामिक द्यिालय डाँडा स्कुलले हात पारेको छ ।
जिल्ला बिकास समितिको आयोजनामा गत २६ गते देखि चलेको रनिङ्ग शिल्डमा १३ स्वर्ण सहित डाँडा स्कुलले प्रथम स्थान हाँसिल गरेको हो । उसले कराँतेमा मात्रै ८ स्वर्ण सहित क्लिन स्वीप गरेको थियो । नेरा मा.वि. डाँडा स्कुलले ३ रजत र ३ काँस्य सहित १९ पदक प्राप्त गरेको छ ।
रनिङ्ग शिल्डको दोस्रो स्थान शिखर मा.वि.रामघाटले प्राप्त गरेको छ । शिखर मा.वि.ले ९ स्वर्ण,३ रजतर ६ काँस्य गरि १९ पदक हात पारेको छ । यस्तै रनिङ्ग शिल्डमा ४ स्वर्ण १ रजत र १ काँस्य सहित जन नमूना मा. वि. वीरेन्द्रनगर तेस्रो स्थान हाँसिल गरेको छ । सिम्ता गाँउपालिकाको आर्थिक सहयो र भानु माध्यामिक विद्यालय बजेडीचौरको समन्वयमा सञ्चालित विभिन्न ६ विधाका खेलकुदमा सुर्खेतका ७६ विद्यालयले सहभागिता जनाएको १ हजार २ सय विद्यार्थी उपस्थीत भएको भानु माध्यामिक विद्यालयक बजेडीचौरका शिक्षक सुन्दर मल्लले बताए ।
भानु मा.वि. का शिक्षक रुद्र केसीले विद्यालयमा खेलकुद आयोजना गरिएकोमा अभिभावकहरु अत्यान्तै खुसि भएको बताउदै स्वस्थ जिवनका लाग खेलकुद महत्वपुर्र्ण रहेको बताए ।
सिम्ता गाँउपालिका अध्यक्ष कविन्द्र कुमार केसीले प्रशिक्षक,शिक्षक सहित थप १ सय २० जना पनि खेल अवधिमा खटिएको र उत्साहजनक खेलकुद सम्पन्न भएको बताए । गाँउपालिकाले होम स्टेको व्यवस्था गरी खेल हेर्न आएका पाहुनालाई खाना र बासको राम्रो व्यवस्था गरेको भन्दै प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिए ।
प्रतियोगितामा छात्रा भलिबलको उपाधी अमर ज्योति नमूना मा.वि. नेवारेले प्राप्त गरेको छ । भने जनता मा.वि. विद्यापुर दोस्रो र जनसेवा मा.वि.सहारे तेस्रो भएको छ । छात्र तर्फको भलिबल उपाधी भने आदर्श मा.वि.लेकफर्साले जितेको छ भने हिमालय मा.वि.चोल्पा दोस्रो र श्रीकृष्ण तथा संस्कृ साधारण मा.वि.ईत्राम तेस्रो भएको छ ।
त्यस्तै कराँते तर्फ नेपाल राष्ट्रिय मा.वि.डाँडा स्कुल प्रथम अरनिको बोर्डिङ्ग स्कुल दोस्रो र भैरब मा.वि.तेस्रो भएका छन् । खेलमा ज्ञानेद्र सुनार एलिसा राण्कोठी उत्कृष्ठ खेलाडी घोषित भए ।
एथलेटिक्स तर्फ शिखर मा.वि.रामघाट प्रथम,जन नमूना मा.वि.दोस्रो र विद्या ज्योति मा.वि.बावियाचैर तेस्रो भए । नविन बुढा पुर्णकली खत्री र विष्णु राईलाई उत्कृष्ठ खलाडीको उपाधी दिईयो । त्यस्तै उसुमा नेरा.मा.वि. वीरेन्द्रनगर प्रथम,एसओएस हर्मन माईनर दोस्रो र जिवन ज्योति मा.वि.दशरथपुर तेस्रो भए ।
आशा शाही र प्रकाश वलीले खेलमा उत्कृष्ठ खेलाडीको उपाधी हात पारे । खेल अवधिभर उत्साहजनक रुपमा विद्यार्थीले सहभागिता जनाएको जिल्ला खेलकुद बिकास समितिका कार्यालय प्रमुख राम बहादुर वलीले बताए । उनका अनुसार आगामी १३ आँै राष्ट्रपति कप रनिङ्ग शिल्ड बराहताल गाँउपालिकाको आर्थिक सहयोगमा जन ज्योति मा.वि. बड्डीचौरमा आयोजना गरिने छ ।
प्रतियोगिता अवधिभर प्रसिद्ध नृत्य निर्देशक कुलमान नेपालीको निर्देशनमा विविध साँस्कृतिक कार्यक्रम प्रर्दशन गरिएको थियो ।प्रतियोगिताकाृ उद्घाटन कर्णाली प्रदेशका प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले गरेका थिए । आज आयोजीत समापन कार्यक्रममा विभिन्न विधामा विविध स्थान हाँसिल गर्ने विद्यार्थीलाई पुरस्कार तथा मेडंल प्रदान गरिएको छ ।